Sidee buu noqon doonaa Mustaqbalka Baarlamaan iyo Guddoonkiisa qeybsan yahay ? | Most Reliable News Source
Mar 24, 2018 - Comments off
Illaa iyo hada wali laguma heshiinta goobta lagu qabanayo cod u qaadista mooshinka iyo xilliga la qabanayo, waana arrin sii cakirnaan hor leh sii gelineysa Baarlamaanka, iyadoo muddo labo todobaad aanu wax kulan dhicin, taas oo sii murjineysa xaalada. Guddoomiye Jawaari oo ay mooshin ka keeneen tiro aad u badan oo ka mid ah Xildhibaanada Golaha Shacabka waa adkaan doontaa inuu kalsoonida xubnaha baarlamaanka dib u hanto xitaa hadii uu mooshinka ka badbaado.
Fursada kaliya ee jiri karta ee Baarlamaanku dib ugu midoobi karo ayaa waxay noqon kartaa in guddoomiye Jawaari meesha ka baxo, Baarlamaankuna yeesho guddoon cusub oo ay ku midoobi karaan, sida ay aaminsan yihiin xeel dheerayaasha, isla markaana noqon karta xalka kaliya ee midnimada Baarlamaanka keeni karta. Dadka odorasa siyaasadda ayaa aaminsan in kala qeybsanaanta uu galay Golaha Shacabka ay horseedi karo xaalado hor leh, iyo habacsanaan ku timaada howlaha sharci dejinta, waxaana dad badan u soo qaadanayaan xaaladihii ka dhashay khilaafaadka Baarlamaanadii 7aad iyo 8aad ee aakhirkii Guddoonkooda meesha ka baxay.